कुन राशि भएका युवतीमा हुन्छ केटालाई आकर्षण गर्ने शक्ति? - Everest Dainik - News from Nepal
कुन राशि भएका युवतीमा हुन्छ केटालाई आकर्षण गर्ने शक्ति?
एजेन्सी । ज्योतिषलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशी भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रिझाउन सक्षम हुन्छन् । १२ राशीमध्ये चार राशी भएका युवतीहरुमा मात्र यस्तो प्रभाव हुन्छ जसले जुनसुकै पुरुषलाई उनीहरुतर्फ आकर्षित गर्न सक्छन् ।
मिथुन राशि भएका युवतीहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जोसुकैलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशी भएका युवतीमा यस्ता थुप्रै गुण हुन्छ जसले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहसँग धेरै उमेरसम्म जवान देखिने क्षमता पनि हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस यी ३ राशिका युवती पाउने पुरुष हुन्छन् भाग्यमानी!
वृष राशि भएका युवतीहरुको गन्ती सुन्दर देवीसँग हुन्छ । उनीहरुसँग अरु व्यक्तिमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने गुण हुन्छ । साथै उनीहरुको कुरा पुरुषहरु निकै सजिलै मान्ने र पूरा गर्ने गर्दछन् ।
वृश्चिक राशि भएका युवतीहरुसँग कसैलाई पनि आकर्षित गर्ने शक्ति हुन्छ । उनीहरुको अनुहार र आँखामा एक प्रकारको सम्मोहन हुन्छ त्यसकारण जसले पनि उनीहरुलाई हेर्छन् उनीहरु मोहित हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस सूर्यग्रहण लाग्दै आज, कुन राशिलाई कस्तो योग?
मीन राशि भएका युवतीहरु रोमान्टिक हुन्छन् । पुरुषहरु उनीहरुको प्रेममा निकै सजिलै पर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मिठो कुराले चाँडै नै पुरुषलाई आकर्षित गरिहाल्छन् ।
ट्याग्स: केटी, ज्योतिष, राशि
काठमाडौं महानगरका २ वडामा अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसाय बन्द
न्यायाधीशमा पनि देखियो कोरोना, ३ दिन अदालत बन्द
सुटकेशभित्र भेटिएको शव पहिचानका लागि तस्बिर सार्वजनिक